Elinye ifu elimnyama e-Australia kushona uSymonds - Impempe
Elinye ifu elimnyama e-Australia kushona uSymonds
May 15, 2022 Impempe.com
Owayengumdlali wekhilikithi wase-Australia nowine iNdebe yoMhlaba kabili naleli lizwe, u-Andrew Symonds, akasekho emhlabeni kulandela ukumbandakanyeka engozini yemoto eQueensland.
Izindaba zokudlula emhlabeni kukaSymonds ziqinisekiswe yiCricket Australia (CA) ngeSonto. Ngokusho kwamaphoyisa ingozi yenzeke eHervey Range ngoMgqibelo ebusuku.
Imoto ebishayelwa uSymonds iphaphalazile yagingqika ngokusho kwamaphoyisa aqinisekise ukuthi kube yingozi yemoto eyodwa kuphela. Amaphoyisa aseQueensland aveze ukuthi asaphenya mayelana nale ngozi.
“Abosizo oluphuthumayo bazamile ukusiza umshayeli oneminyaka engu-46, noyedwa abehamba naye, kodwa washonela khona lapho ngenxa yokulimala kakhulu,” kusho isitatimende samaphoyisa.
Usihlalo weCA uLachlan Henderson, uthe ikhilikithi yase-Australia ilahlekelwe omunye wayo obehamba phambili. Ukushona kwakhe kulandela ukudlula emhlabeni kukaRod Marsh noShane Warne, bobabili abashone ngoMashi.
“U-Andrew wayenekhono kakhulu futhi waba nesandla kakhulu ekutheni i-Australia iwine iNdebe yoMhlaba kabili. Ubeyingxenye enkulu yekhilikithi yaseQueenslands enothe kakhulu ngomlando,” kusho uHenderson.
“SiyiCricket Australia siyazwelana kakhulu nomndeni wakhe, yilabo adlale nabo nabangani.”
USymonds uwine iNdebe yoMhlaba ne-Australia ngo-2003 nango-2007. Udlale imidlalo yosuku olulodwa engu-198 neyeT20 engu-15.
Previous Previous post: IChiefs izinike ithuba lokulwela indawo emidlalweni yeCAF
Next Next post: I-PSL izoqhatha amaqembu ngezinqumo zayo ngeyeCAF